Lungela Ukuyeka - Ama-802Quits
Ikhaya » Ama-Vermonters » Izizathu zokuyeka » Lungela Ukuyeka
Ngabe uyazibuza ukuthi iyiphi indlela engcono yokuyeka ukubhema, i-e-cigarettes noma olunye ugwayi? Amathuba akho okuyeka angcono kakhulu uma unohlelo lokuyekela olwenziwe ngokwezifiso. Lesi sigaba sizokuhambisa ukuthi ungene kanjani endleleni eya ohlelweni lokuyeka ukuvumelanisa kanye nokuyeka ngempumelelo.
Ezinye izinto ezilula ongazenza ngaphambi kwesikhathi — ngisho kwamanje! —Ukusiza ukwandisa amathuba akho okuphumelela afaka phakathi:
Ukulahla izinto zikagwayi ekhaya lakho, njengezithutha zomlotha, amalambu namaphakethe athe xaxa kagwayi noma ama-e-cigarettes, ugwayi ohlafunwayo, isinemfu noma izimpahla
Ukuhlanza indlu yakho nemoto yakho ukuze iphunga likagwayi lingakulinge uma usuyekile
Usebenzisa isiqeshana seviki eliholela kudethi yakho yokuyeka ukunciphisa ukuhoxiswa kwe-nicotine (funda kabanzi mayelana amabala wamahhala avela kuma-802Quits)
Ukucela ukusekelwa kosebenza nabo, abangane namalungu omndeni ukukusiza uphumelele
Ukuthola umngani ozoyeka ozokuphendula ngegoli lakho lokuyeka
E-ugwayi kukhona hhayi evunyiwe yi-US Food and Drug Administration (FDA) njengosizo lokuyeka ukubhema. Ama-e-cigarettes namanye ama-electronic nicotine delivery systems (ENDS), afaka ama-vaporizer, ama-vape pens, ama-e-cigar, i-e-hookah kanye nama-vaping amadivayisi, angaveza abasebenzisi kwamanye amakhemikhali afanayo anobuthi atholakala entuthu kagwayi evuthayo.
Noma ngubani oyeka ugwayi uyakwenza lokho isizathu. Kwabanye abantu, abafuni ukuzizwa beshiywe ngaphandle lapho bonke abangane babo beyekile. Kwabanye, kwenzelwa impilo noma umndeni noma ngenxa ye- izindleko ezikhuphukayo zikagwayi. Siyini isizathu sakho?
Bhala phansi izizathu zakho zokuyeka ugwayi, ama-e-cigarettes noma eminye imikhiqizo kagwayi.
Cabanga ngabaningi ngangokunokwenzeka, abakhulu noma abancane
Beka uhlu eceleni izinsuku ezimbalwa
Ngemuva kwalokho, hamba ukhethe izizathu ezi-5 eziphezulu
Gcina uhlu lwakho nawe bese ufaka ikhophi esiqandisini sakho noma emnyango wangaphambili. Lapho isifiso sokusebenzisa ukushaya kukagwayi, uhlu lwakho lwezizathu zokuyeka luzosiza ukudlula kwakho kokulangazelela futhi likukhumbuze ngokuzikhethela okuhle okwenzile.
Yenza Uhlelo Lwakho Lokuyeka Ukwenza Ngokwezifiso
Kuthatha umzuzu nje ukwenza uhlelo lwakho lokuyeka ukuvumelanisa.
Yenza Uhlelo Lwami Lokuyeka>